Allgedo.com » Maxaa sababay in uu faraha ka baxo ammaanka Muqdisho? Saameyn nooce ayuuse ku leeyahay Sheekh Shariif? By Daahir F. Afdheere
Print here| By: allgedo.com: Sunday, September 23, 2012 // 3 Jawaabood
Waxaa maalinba maalinka ka dambeysa faraha kasii baxaya ammaanka magaalada Muqdisho, waxaanna mar qura shal-fariirtay noqday xasilooni aan caga-buuran ku taagnayn oo Dawladda Soomaaliya bilihii la soo dhaafay ay ulo booco-booco ugu qutubaysay.
Waa tii habeen baas qarax lala beegsaday hotel Al-jazeera oo uu Madaxweynaha cusub ka degganaa Muqdisho, waa tii dharaar cad Maqaaxida Village lagu xasuuqay suxuufiyiin iyo qaybo kale oo bulshada ah waxgalna ah, waa tii casar gaaban Xildhibaan Mustafa dil qorsheysan loo maleegay, waatiise mid-mid ay baaruudu u leeftay shacab aan waxba galabsan.
Hadaba waxaa dad badan ay is weydiin karaan, su,aasha ah, bal maxaa sababay in uu amaanku magaalada Muqdisho uu mar qura noqdo tusbax go’ay.
Tan iyo markii 10 bishaan Sebtembar uu Soomaaliya ka dhacay isbedel aad u weyn oo siyaasadeed, isla markaanna la caleema saaray Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ugu dambeyntii doorasha oga guulaystay Madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif ayay xaaladda Soomaaliya waxay isu bedashay mid Baraka-maleh ah!
Dambiga malahan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waa madaxweyne loo hanweyn yahay, oqoonyahan wax ka bedeli kara marxaladda muragada leh ee Soomaaliya, dadka somaaliyeed oo dhanna ay aad ugu farxeen, ee su,aashu waxay tahay, waa halkee meesha ay sartu ka quruntay!
Sida aan la wada soconno Sheekh Shariif wuxuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu markale kursiga u sal dhigan lahaa, taasoo uu ku bixiyay malaayiin Doolar oo uu kal hore musuqmaasuq ku qaatay, hadaba markii doorashada looga guulaystay waxaa ku dhacay filanwaa aad u weyn waxaanna u furmay bog cusub oo ay ku qoran yihiin: naxdin iyo caloolyoow, ciili iyo caro, amakaag iyo anfiriir iwm.
Sheekh Shariif waa marnaba u cuntami weyday inuu saacado gudahood waayo kursigii uu sanado ku naalooday! Kusigii gorof cayreed ka tuuray! Kursigii Dalal badan oo uu maqal mooyee aanu muuqaal waligii ku arag dalxiis u geeyay!
Sheekh Shariif keligii buu inta faqay qol isku soo xiray, markaasuu inta mar qura gacmaha sare u qaaday ku ducaystay “waxba dhawran maynee Allow dhagaxyo soo daadi!”.
Sida caadiga ah Madaxda Dawladaha soo mara Soomaaliya waxaa hab dhaqan u ah, haddii xilkii ay horey u hayeen masuul kale loo magacaabo, amaba uu doorashada oga guuleysto inay ka shaqeeyaan sidii aan marnaba looga raysan, si loo ammaanno oo hadhoow loo yiraahdo hebelbaa fiicnaa! Sidaa awgeed ayaa waxaa ay dad badan ay tuhun weyn ka qabaan in doonista iyo himilada sare ee Sheekh Shariif ay ku soo uruurtay sidii uu u jilaafayn lahaa Dawladda Cusub.
Ku luglahaanshaha Sheekh Shariif ee ammaanka faraha kabaxay ee muqdisho ka sakoow, waxaa jira qodob kale oo aad mihiim u ah oo isagana keeni karo in wax laga qabto ammaanka muqdisho:
Sida aynu wada ogsoonahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu si cad u sheegay in lagu wareejiyay qasnad maran oo aanu shilin ku jirin! Hadaba dhaqaaaluhu waa tiir dhexaadka wax looga qaban karo ammaanka. Maxaa yeelay Ciidamadu waxay u baahan yihiin dhaqaale iyo daryeel gaar ah oo ay hawgallo iyo iyo baaritaanno amniga lagu sugayo ay ku sameeyaan.
Ma filayo in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hayo dhaqaale buuran oo uu wax oga qaban karo ammaanka fara ka baxay, waxaanna suurtagal ah in deeq bixyaasha caalamka aanay weli waxba soo gaarsiin, xilli madaxdii hore Dawladda ee uu Sheekh Shariif ugu horeeyo ay ku maqan tahay 130 milyan.
Isku soo wada duuboo labadaas qodob ee aan kor ku faaah-faahiyay waa kuwa ugu waaweyn ee sabab looga dhigi karo in uu faraha ka baxo ammaanka Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Qoraa Sare: Daahir F. Afdheere
3 Jawaabood " Maxaa sababay in uu faraha ka baxo ammaanka Muqdisho? Saameyn nooce ayuuse ku leeyahay Sheekh Shariif? By Daahir F. Afdheere "
Waayaab! qolyhan dadka iyo shacabka beegsanaya may aadaan xeryaha Ugadhayska, waa iyaga maatada laynaya marwalba. mise su’aashu dowlada kale ayaa shaqaysaya oo qiimo malahan nafta mu’aadinka Soomaliga?. Qoraalkan xiisahaleh, aragtidayda ku aadan arintu way kawayntahay Sheekh shariif iyo hamigiisa kursiga inkastoo ay reerka muqdisho dagan ay kamidan san yihiin in Soomaliya ay dowlad yeelan. Waxaad ogataa in dawladla’aanta Soomaliya ay maslaxad ugu jirto dawlado badan haba ukala darnaadaan. khaasatan kuwa ku bahoobay magaca (OPEC) arimo dhaqaal owgeed. Midakale ma wax cadaynaya ayaad haysaa inuu shiikhshariif uu 130milyan qaatay waxaan ka’ ahayn qoraalada World bank? waxaa iswaydiin mudan yaa bixiya dhaqaala Amison xagaysa lacagtu katimaadaa inteeda bad, imisaa dawladaha khaliijka iyo (OPEC) siiyaan Amisom iyo Shabaab.
Ugudambayn waa lagayaaba marka laga qaxo Riyaad Abudabi iyo Dehran in Soomaliya ay hesho wax dowlad u eg oo dawlada dariska ah ay maamushaan.
Haddii si dhab ah loo baaro arrintaan iyadoo loo tixraacaayo hadallada hoos ku qoran oo meel fagaare looga dhawaaqy, kuna dhawaaqeen Niman Xilal waaweyn ka soo qabtey Somalia, iyo Sheikh Shariif iyo xariif Sakiin waxaan si cad u qiyaasi karnaa cidda ka dambeyso dilalka qorsheysan, qaraxyada, iyo amni darrada ka jirta Muqdisho:
1) Munaasabadii lagu taageeraayey Sheikh Shariif oo ugu dambeysey , Ra’iisul Wasaarihii TFGda Cali Geedi wuxuu yiri ” Haddii Sheikh Shariif la dooran waayo, Ciidanka Shalamboot jooga Nr Afar ayaad ku arki doontaan,” Nabadana Sheikh Shariif ayaa keeney cid kalena wax kama qaban karto.
2) Shariif Sakiin wuxuu yiri ” Sheikh Shariif waa Saaxiibkeey, taako ayuu ii dhigey, laakin aniga uma dhigaayo, waana dooraneynaa si uu u dhameystiro hawshii uu soo bilaabey, waana inuu guuleysto haddii sidaas la rabo”
3) Tarzan wuxuu yiri ” Muqdisho nabadeeda waxey ku xiran tahay Sheikh Shariif oo dib loo soo doorto” haddii kale halkeeda ayey ku noqon doontaa.
4) MP Khadiijo waxey tiri ” Hawsha qabyada ah ninkii bilaabey keliyaa ayaa dhamystiri kara” waa in la doorto Sheikh Shariif.
Dad badan ayaa horey u ogaa in amni darrada Muqdisho ay tahay Shaqo ay abuurteen Sheikh Shariif, Sakiin, Tarzan iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Shekhuna, kan Nabad Sugidda Fiqi iyo Madaxda Moorayaan Beeledka oo hor boodaaya kuwa lagu sheegey Ciidamada Dawladda.
Dawladda Cusub haddii aysan tallabo iyo is-beddel muuqda ka qaadin Taliye yaasha Ciidamada wallee waxey lugaha la galeysaa Dhooqadii Naarta oo ay Shideen Kooxdaas Moorayaanta ah.
salaan qaali ah walalhayga fikradahooda kala duwan mesha kusoo jeediyey waxaanan fikradeyda laqabaa walaalkeyga ugu fikrad dambeeyey waxaana dhahaayaa arimahaas oo dhan waa wax jira in nimankaas mooryaanta ajh ey rabeen in markale lagusoo doorto oo maalmo yer ey ku xasiliyeen magaalada muqdisho waxana hada eyrabaan iney wajiga aduunka tusaan iney xamar nabadeeda iyaga ku xirneed laakinse waalaidinka diidey waxaad halaageeseen baa badnaa idinka iyo mujrimiinta shabaab wakhtigiinii waa dhacay insha allaah somaliya waa cusub baa u baryey soomaaliya hanoolaato intii neceb ama kasoo horjedo somaliya oo nabada ama wanaaga illaah hanaga qabto nabadey…………..